Diraya ilmo off kulliyadda | USAHello | USAHello
Diraya ilmo off kulliyadda waa mid aad u xiiso badan. waxaa laga yaabaa inaad labada neerfayaasha iyo farxad. Waa isbeddel weyn oo qoyska oo dhan. Ogow sida loo diyaariyo oo aad ilmahaagu uga caawiso. Baro adeegyada ardayga ku saabsan, sahay gadashada, iyo joogtid xiran.
Hambalyo isagoo ilmo waa off kulliyadda! Waa weyn, isbeddel wanaagsan. Laakiin socday kulliyadda noqon kartaa wareeriya. Ilmahaagu waxaa laga yaabaa dareemayaasha ku saabsan kulliyadda.
Ha ka welwelin. Waxaa jira waxyaabo aad samayn karto si ay u fududaato:
Hubi inaad soo booqato campus ka hor maalinta ugu horeysa. kulliyadaha qaar ka mid ah waa mid aad u ballaaran, iyo ilmahaaga waxaa laga yaabaa in welwelina is badiyay. Waxa laga yaabaa inaanay garan meeshuu ka si aad u hesho cunto ama waxbarasho. Garanaynin meeshuu wax walba waa la dhigan doono iyaga kalsooni badan. Kulliyadaha maalmo gaar ah booqasho ardayda cusub. Your arday ka heli doontaa macluumaad ku saabsan maalmood booqashada marka isagu ama iyadu iska diiwaangeliyo.
Isticmaal xafiiska Adeegyada Ardayda
Haddii aad u baahan tahay caawimo inta aad halkaas joogtid, waxaad booqan kartaa xafiiska Adeegyada Ardayda. Waxay ku siin karaan khariidado iyo su'aalaha jawaabta. Ardayda tagi kartaa Adeegyada Ardayda waqti xafiiska in ay u baahan yihiin marka ay kulliyadda. Tusaale ahaan, ay socon karaan haddii aysan hubin in ay qaataan fasalo, ama haddii ay lumin kaarka aqoonsiga dugsiga.
Raadi meel ay ku noolaadaan
kulliyadaha qaarkood waxay leeyihiin la dejiyey (“Qolal” marka la soo gaabiyo). Qol A waa dhismo la qolal badan oo ay ardaydu ku nool yihiin. Qolal hurdo oo sida caadiga ah waa wax badan ka jaban tahay guryaha. All of kharashka ku nool yihiin waxaa ka mid ah in mid ka mid ah qiimaha. sidoo kale waxay ammaan u yihiin sababtoo ah waxaa jira kamaradaha ammaanka iyo ilaalada waxaa. Ku dhawaad ​​dhamaan ardayda oo dhan waxay leeyihiin dagan inta lagu guda jiro sanadka ugu horeeya ee jaamacadda, ma laha, halkaas oo ay ku nool yihiin.
Haddii uu ilmahaagu rabo in ay ku noolaadaan Qol a, iyaga saxiixdo hore. Waxaa jira qadar kooban oo qolalka.
Qaar ka mid ah ardayda guri ama guryo kiro. Waxay wadaagaan guriga laakiin sida caadiga ah waxay yeelan doonaan in ay qol u gaar ah.
Si aad u hesho guri dabaq ah ama guri, fiiri online at websites sida rent.com, craigslist.org, ama bogga internetka ee dugsiga. waqti ay ku soo fiirin at meelo dhowr Qaado. Weydii haddii biyo iyo koronto ku jira kirada. Haddii ilmahaagu leeyahay xayawaanka, weydii haddii dhismaha ogol xayawaanka. Ka fikir nabadgelyada iyo sida dhow u tahay in dugsiga. Hubi in ay si taxadar leh u akhri heshiiska ka hor intaadan saxiixin. Haddii aadan awoodin, heli saaxiib ama qaraabo kaa caawin kara.
Waxuu cunuggaaga u baahan wax ka mid ah dugsiga iyo meel cusub oo nool:
gogosha (bustayaal, barkimo, go'yaal iyo pillowcases)
sahay Desk: notepads, qalimaan, oo laambad miiska a
computer: waxaa muhiim ah in ay computer laptop ah. Haddii aadan bixin karin hal, waxaa laga yaabaa in aad awoodid in aad codsato mid ka mid ah iyada oo loo marayo Adeegyada Ardayda ama urur caawiya ardayda dakhligoodu hooseeyo. Ilmahaagu waxaa sidoo kale isticmaali kartaa shaybaar kombiyuutar ee maktabadda.
dambiil dhaqid: haddii aysan jirin mashiinka dharka lagu dhaqo oo ay guriga ku, mid la soo iibsan giraangiraha. Waxaa ka dhigi doonaa mid sahlan ilmahaaga si aad u qaadato in lagu dhaqdo. Qolka dharka lagu dhaqdo A waa meesha dadka ku bixin in la isticmaalo mashiinka dharka lagu dhaqo iyo qalajiyaha.
Qalabka nadaafadda: daawada cadayga iyo buraashka, shanlo / burushka, shaambo iyo saabuun, shiir
Electronics: headphones iyo fiilooyinka
xirfadaha nolosha Practice
Carruurtaada yeelan doonaan in ay nafsadooda uga taxadaraan. Haddii iyagu ma ay yaqaaniin sida wax loo kariyo, ku tusin sida loo sameeyo cunto fudud. Karinta iyaga ka qarash lacag aad u badan at maqaayado dhawri doonaa. Bar meesha si ay u dukaameystaan ​​cunto caafimaad leh oo la awoodi karo.
Haddii ilmahaagu aanu ku gartaan si loo sameeyo dharka lagu dhaqdo, ku tusin. Haddii ay yeelan doonaan baabuur, iyaga bari sida loo is ogow waxa of. Hubi inay ogaadaan goorta iyo sida aad u hubiso in ay saliid, biyaha, iyo taayirada.
Waxa ugu muhiimsan ee aad ilmahaaga la baro karo waa sida loo daryeelo oo ay lacag. La hadal ah oo ku saabsan kharashka iyo sida loo sameeyo miisaaniyad si aanay lacag aad u badan ku qaataan. Sharax sida loo bixiyo biilasha iyo waxa dhacaya haddii aadan. Haddii aad rabto in ilmahaagu leeyihiin credit card, ka heli mid ka mid ah ka hor inta ay ka baxaan. Mararka qaarkood shirkadaha credit card isku dayaan in ay khiyaameeyaan ardayda adeegyada credit card qaali. Waxaa fiican inaad kaarka bangiga aad ku kalsoon tahay u hesho.
Ilmahaaga ayaa seegi doona gurigooda iyo waalidiinta. waqti ay ku soo wici oo arag qaad siday yihiin, xataa haddii ay u muuqdaan kuwo ku faraxsan. Sidoo kale waxaad u soo diri kartaa baakadaha daryeelo. xirmo daryeelka A waa sanduuq wax ay jecel yihiin ka buuxsamay. cuntada kuwa wax xun ama maalin kasta tegi maayo waxaad ku diri kartaa waqtiga oo dhan ay u isticmaalaan sida saabuunta, shaambo, ama weelka dareere.
Waalidiin badan booqo carruurtooda kulliyadda haddii ay awoodaan. Tani waxay noqon kartaa mid adag oo qaali ah haddii ay fog tahay. Haddaad awoodid, tigidhkiisa iibsado ka hor si loo badbaadiyo lacag. Marka aad ka maqnaan ilmahaaga, ka dhigi doonaa in aad ku faraxsanahay in la ogaado in aad arki doonaa mid kasta ugu dhakhsaha badan oo kale. Haddii aadan soo booqan kartaa, download Skype ama software kale kuu oggolaanaysa in aad la hadasho iyada oo camera a. Waxaa isku mid ma aha, laakiin waxaa kaa caawin doona inaad dareentid dhow.
Waxaa laga yaabaa inaad qabtid su'aalo kale oo ku saabsan sida loo caawiyo. wadahadalo la taliye ah oo ku saabsan sida si ay u taageeraan ilmahaaga.
Buuxi codsiga kuliyadaha aad
Robert Nishimwe uu aqbalo University Georgetown
College fiisa iyo sida loo iska ilaali
Liiska waxa ay u soo iibsadaan, waayo, sannaddii kowaad ee kulliyadda
Raadi laptop ah oo lacag la'aan ah
guri ama guri Raadi